Ngokusho kweNkampani yeRMB, ukuhweba izolo ngezinye izimali ze-US eziphelile ziphela ngo-zero, kanti abanye bakhula, ngemuva kokunciphisa ekuqaleni kweseshini yokuhweba ekuphumeni kwe-makrostatistiki engalungile.
Ngokombiko we-Institute of Supply Management, inani lomsebenzi webhizinisi ekukhiqizeni kwe-US lawela endaweni engaphansi kuka-50.0% ekuqaleni kokuqala kuka-2009 futhi kwafinyelela ku-49.7% ngokumelene no-53.5% inyanga ngaphambili, okuyiyo yonke ingakhuphula ukucabangela mayelana nenqubomgomo eyengeziwe yemali ye-Fed Izinqumo emhlanganweni ozayo weKomiti Ye-Federal Open Market, ezoba ngoJulayi 31-Agasti 1.
Ngokombono we-RMB Company, abathengisi bavame ukubheka isikhathi esifushane nokukhula engxenyeni yesibili yeseshini yokuhweba kuqinisekisa ukuthi iningi labathengi balindele ukuthi izinga le-ECB lithathwe yi-25 bpts. Kuze kube ngu-0.75%. Futhi phakathi kwabahlaziyi, kukhona imibono mayelana nesinqumo se-ECB sokunciphisa inani lentengo yamabhange ezentengiselwano afakwe kwi-ECB. Kumele kuqashelwe ukuthi kukhona abatshalizimali abalinde ukuqaliswa kokusha noma ukwandiswa kwezinhlelo ezindala zokunikeza izimali kumabhange aseYurophu ezentengiselwano.
Ekugcineni, usuku lokuqala lokuhweba lwesonto luvalile ukwehla kwezingu-0.07% kuya ku-12871.39 amaphuzu ku-index yeDow Jones Industrial, kwi-Standard & Poor emakethe enkulu emakethe, abathengisi baphela ekukhuleni kwe-0.25% kumaphuzu angu-1365.51, inkomba Ubuchwepheshe obuphakeme be-Nasdaq Okuhlanganisiwe ngemiphumela yokuhweba kwanezelwe ngqo ngo-0.55% futhi kuqedile iseshini yokuhweba ngoLwesihlanu emazingeni angu-2951.23.
Ngamunye, singakwazi ukukhipha ukuhweba kumholi emkhakheni wamadivayisi wekhompyutha ephathekayo, i-Apple Inc. Okukhulile ngo-1.5% futhi kuvaliwe ngo-592.52, ngemuva kokuthi iphephandaba laseShayina libike ukuthi inkampani ixazululene izingxabano ukuze kube nelungelo lokuthola uphawu lokuhweba "i-iPad" nenkampani yaseChina i-Proview Technology, ekhokhela amaRandi ayizigidi ezingu-60. Isixazululo salolu daba ngaphandle kwenkantolo samenyezelwa ku-$ 1.6 billion.
Izindaba ezibalulekile ziyizindaba mayelana nokushiya usihlalo webhodi labaqondisi bakaBarlaylay Marcus Ageus, owashiya isikhundla sakhe ngenxa yokugxekwa nokukhwabanisa kwezinga lesithakazelo ebhange, okuyinto inkampani yahlawuliswa ngamapounds angu-290 wezigidi futhi amasheya enkampani awela ngaphezu kuka-20.0% . Ngowezolo, isitokisi senyuke ngo-3.40% futhi siphelile ukuhweba ngamapounds angu-168.44.
"IsiKhwama seHedge": ukuthi izifundo zokutshala izimali zinganciphisa kanjani izingozi